DAL-JIRE | wadaagga fikir xor ah, waa barbilowga adduun-arg huffan
This entry was posted on December 16, 2013, in Hoyga, Qormooyinka, Sheeko Gaaban and tagged Ina geeddi, sheeko, sheeko gaaban.
“wax daran Alle inooma keeno” ayuu ninkii oo dib u soo tallaabo hakiyay odhanayaa. “nin socoto ah ayaan ahay liibaanto, xalay iyo saakaba tub ku joog ayaan ahaa oo wali ma afurin, bal inuun waxaan afka ku qabto haddii aad karto.” Continue reading →
This entry was posted on August 16, 2013, in Hoyga, Sheeko Gaaban, Suugaan and tagged abaal gal, sheeko. sheeko gaaban. gashi..	4 Comments
Foodhida, orta iyo sawaxanka waa carraabaha geelal horwayn oo casar-gaaban oo liiq ah, kolka iftiinka qorraxdu gabo kulka falladhaha daran ee uu xilli kaliileed ku liishaamaysay sibraha wada godan ee habeedda udgooni ka soo siniinayso. Maalin dheerayd oo aroor biyo cab oo ceelal jiidda ka durugsan laga soo dar qaaday ka dib, geelashu waxay hadda kaabiga ku hayaan xeryahoodii oo madaxa kaynta ku yaal, meeshu waa hawd iyo carro jiq iyo geed ah oo geelasha xilliga biyahu fogaadaan caleen u leh, jiiddu waa geel iyo rag iyo bahal. Continue reading →
This entry was posted on June 20, 2013, in Hoyga.	Leave a comment
Markii aan uurka hooyaday gelayay, aabbahay kamuu raalli ahayn. Sidaas darteed, wuu iga dhaartay markii uu maqlay warkii bushaaradayda, waxaanu wacad ku maray in haddii ay hooyaday sheegato uu na wada dili doono. Inkasta oo aan guriga ayeyday ku dhashay, malaha kama aan qiime badnayn dheg ubax ah oo ku dul curatay xayaabkii wejhadda gurigaas ku yaallay. Malaa waa sababta magaca Ubax la iigu bixiyay. Continue reading →
This entry was posted on January 17, 2013, in Hoyga, Sheeko Gaaban and tagged sheeko, sheeko gaaban, sheeko xasuus leh, sheeko xiiso leh, sheeko xikmad.	15 Comments
This entry was posted on October 27, 2012, in Hoyga, Odhaahda Sawirka and tagged bulsho, eray, hal ku dhag, hees, liibaan, murtida maanta, odhaah sawir, xikmad.	Leave a comment
“waar maxaa la sheegay? Continue reading →
This entry was posted on September 15, 2012, in Hoyga, Sheeko Gaaban and tagged curis, dhibka qaadka, gaaban, jaad, sheeko gaaban, sheeko qosol, sheeko xiiso leh, sheeko xikmad.	4 Comments
Markii ugu horaysay een warkan maqlo oo Ramadantii ahayd, waxa aad ii xiisa galiyay warka sheegaya in qayb ka mid ah dhulka soomaalida –Kismaanyo- lagu afuro saanbuuse hilib waraabe duqad looga dhigay, Waxay igu noqotay dhacdo ugub ah, si walba xaal ha u jiree, waxa bilaabantay fadhi ku dirirnimadii dadku caadada u lahaa, qolo cid gaar ah ku ceebaysa, qolo dacaayado shaqsi ku faafiya iyo qolo kale oo doodahoodii ku sii xoojista iyo dhaleecaynta wadarta (group judgments). Aniga waxay tusaale buuxa iigu noqotay heerka dhalangaddiska ee qiyamta iyo si-araga shaqsiga soomaaliga ah iyo jihada uu u socdo, kaasoo tobaneeyayalkii sano ee soo gudbay xardhayay qaab nololeedkii bulshe iyo qiyamteedii (social values & social beliefs), taasise ma ahan mawduuc aan hadda ku jirno faaladiisa.
Qadiyada waraaba cunista iyo xukunkeeda diiniga ah –xaaraan iyo xalaalnimadiisu- waa mid aan uga hadhayo xeeldheerayaasha cilmiga fahanka diinta iyo xeerarkeeda fiqhiga. Waxase waysiinta wayni tahay, sababaha dhaliyay ku dhiirashadaas, jeer soomaalida iyo u baahashada hilabka waraabaha ay uga sokayso meesiyo badan oo xoolo ah, iyo xeebo kalluun badan. –in kastoo xaaladaha gaar ahi jiraan-. Wax walba oo simay hilibka geela iyo ka horarkii laga ilaashan jiray ee waraabahu marna xaalad caadi ah ma ahan. Wakhti ay jirtay in ninka geella lahi uu yasi jiray ka dhaqda lo’da, adhiga, kaluumaysiga, dhul faladka, ama dabashada duurjoogta, xilli uu geeljir hanwayni ku heesi jiray:-
“Anoo soof iyo
sac nin haystiyo
saa u noolyahay!!” Continue reading →
This entry was posted on September 3, 2012, in Hoyga, Suugaan and tagged dhacdo, dhidar, dhurwaa, Gabay, gabay dheeg, ismacil mire, sheeeko xiiso leh, suugaan, waraabe.	Leave a comment